Marina ve fa tsy azo sarahina ny SEO sy ny backlinks?
Eny, marina izany - ny SEO dia mikasika ny kalitao momba ny kalitao, ary ny mifamadika amin'izany. Raha ny marina, ny rohy momba ny rohy ao amin'ny tranonkala dia tokony ho ivon'ny tetikasam-pikarohana fikirakiranao amin'ny fikarohana. Tahaka ny lafiny hafa amin'ny seho, ny backlinks momba ny kalitao dia mety hanome anao valiny haingana sy maimaim-poana amin'ny alina. Ny ankamaroany, ny tetikady fanorenana rohy amin'ny alàlan'ny fambolena dia ny fitohizan'ny tari-dàlana lalina sy ny fikolokoloana mba hitazonana ny fahombiazana. Ary afaka manao ny ezaka rehetra ataonao ianao - izay rehetra ilainao dia ny manara-maso akaiky ny dingana ary mahafantatra ny tranonkala rehetra mifandray aminao. Raha vao jerena, dia toa asa goavana izany.
Fa aza manahy - mialà fotsiny ary ampiasao ny iray amin'ireto fitaovana an-tserasera manaraka ireto mba hanaraha-maso ny mombamomba ny backlink, toy ny nataoko tamin'ny bilaogiko. Ireto misy izy ireo - Semalt Analyzer (Semalt), Open Site Explorer (Moz), na Fehezanteny. Amin'izany fomba izany, aoka ho azonao antoka fa ny piklà rehetra dia mifandraika amin'izany, ary misy koa manana tononkalo iray manan-danja. Ny zavatra dia tsy tokony hanana vatofantsika ankosotra toy ny "tsindrio ity rohy ity. "Manolo-kevitra ny hitazona azy ireo bebe kokoa ianao, ary mazava ho azy fa misy soso-kevitra fototra iray farafahakeliny mba hanolorana soso-kevitra fohy, mba hahafantaran'ny mpampiasa iray ny zavatra azo andrasana.
Good SEO mila backlinks amin'ny kalitao
Ny tena mahazatra dia ny famantaranandro lehibe indrindra (ny Google mihitsy) dia mamaritra ny laza, fahefana mifototra amin'ny kalitaon'ny mombamomba azy. Izany no mahatonga ireo backlinks organika amin'ny ankapobeny ho anisan'ireo mari-pamantarana mahery indrindra izay homena toerana ambony kokoa amin'ny lisitry ny valin'ny fikarohana. Mieritreritra aho hoe, ny backlinks dia tena lohahevitra tena manan-danja, indrindra indrindra momba ny vaovao farany momba ny algorithm natolotry ny Google. Vokatr'izany, ny momba ny backlinks rehetra tokony ho anao dia ny kalitao sy ny zavamaniry voajanahary, fa tsy ny habetsaky ny mahantra fotsiny, na ny mandràra ny rohy amin'ny automated.
Inona no mahatonga ny backlink-kalitao?
Araka ny manam-pahaizana manokana momba ny SEO, ny antontam-baovao mahazatra dia voafaritra amin'ny antony maromaro. Voalohany, ny fichier vita amin'ny kalitao dia avy amin'ny tranonkala iray manan-kaja izay manana fahatokisana sy fahefana ambony. Faharoa, tokony hitazona ny fifamoivoizana amin'ny tranokala any amin'ny tranokalanao na blôginao. Avy eo, ny lalam-panorenana tsirairay dia tokony hampidirina amina lahatsoratra matoan-dahatsoratra marina - na miaraka amin'ny teny filamatra mazava, fehezanteny lavalava na farafaharatsiny farafaharatsiny. Farany, mbola tsy tratran'ny fahamendrehana velively ny famerenana bakalorea ho an'ny SEO. Noho izany dia tsy hita ao amin'ny lahatsoratra votoatiny izy ireo. Tadidio anefa fa io fahasamihafana io no tena ilaina hampitambatra ny fahombiazan'ny fanorenana. Midika izany fa manana fonosam-pifandraisana maro samihafa aho miaraka amin'ny rohy isan-karazany avy amin'ny toerana samihafa miaraka amin'ny laharam-pahamehana amin'ny sehatry ny sehatra sy ny sehatr'asa - dia azo raisina ho toy ny singa boribory mahomby avy amin'ny fomba fijerin'i Google, ary koa ny sisa amin'ireo motera fikarohana lehibe.
Mampalahelo fa matetika loatra ny olona no miantso ny sazy henjana - manao ny tsara indrindra hananganana backlinks amin'ny ankapobeny. ny toro-làlana fikarohana. Maro ireo fomba namorona manokana hamitahana ireo fitaovana fitadiavana. Raha manaiky an'io zava-misy io, dia tsy nankasitraka tanteraka an'ity Gray Hat practice ity toy ny rohy miafina na lahatsoratra voasoritra, volavolan-dalàna vita amin'ny banky, mampitombo azy ireo amin'ny "fambolena havoana", fifanakalozana fifandraisana (sns), sns.Mazava ho azy, ny sasantsasany amin'ireny tetika ireny dia mbola ampiasain'ny webmasters tsy manelingelina na tompona tranonkala vaovao. Na izany aza, dia tokony hiala amin'ny fampiasana rafitra manipulative ianao. Raha tsy izany, dia mora foana ny manatona azy rehefa feno ny tranonkala manontolo amin'ny voka-pikarohana rehetra - indray mandeha ary mandrakizay Source .